August 2012 - पेटबोली ...!
Monthly Archive:: August 2012	Sort Posts by:
यौन, पत्रकार र व्यक्ति !
The only reason for beingaprofessional writer is that you can’t help it- Leo Rosten पत्रकारहरूका बिच सधैं एउटा टिप्पणि हुने गर्छ- ‘अरूको समाचार आओस्, आफू समाचार नबन्नु।’ बिडम्बना, गएका एक दुई दिनमा नेपाली पत्रकारहरूका समाचारले भरिए सामाजिक सञ्जालहरू। प्रशस्त आलोचनाहरू पनि भए। हुनत योभन्दा पहिले पनि	Tweet
आज बाबुको मुख हेर्ने दिन! अहिलेसम्म मैले मेरो बुबाको मुख तास खेल्ने बेलामा एउटै खालमा बसियो भने र फोटोमा बाहेक राम्रोसँग हेर्न सकेको छैन। कान्छा, एउटा सिर्कानो लिएर आ’त भन्नुहुन्थ्यो बुबाले। अनि म कस्ले आज दरो भेट्ने भो भनेर दंग पर्दै सिमलीको सिर्कानो खोज्न दौडिन्थेँ। जब सिर्कानो	Tweet
नेपालीकरण उर्फ ट्रान्स्लेसन् :)
काम गर्दै जाँदा अनेक अनेक गर्न मन लाग्छ 😀 विपीको ‘जेल जर्नल’ का पाना पल्टाउँदै जाँदा रमाइलो लाग्दै गयो। पढ्दै जाँदा केही अङ्ग्रेजी शब्दहरूको नेपाली रूपान्तरण पनि भेटियो। अङ्ग्रेजीमा सुनिरहेका केही शब्दहरूको नेपालीकरण त साँच्चै गज्जप लाग्यो। हुनत, बरू अङ्ग्रेजीमा बुझिएला तर त्यो नेपाली शब्द बुझ्न शब्दकोष नै	सामाजिक सन्जाल	अनन्त कोइराला